Pane-saiti Kubata kweCannabis - iyo yekupedzisira Stigma yeMarijuana Prohibition Kuwira
Pa-saiti Kubata kweCannabis
Chii chinonzi Social Use weCannabis?
Pane-saiti cannabis Use kana yeCannabis Social Use yakagara yakabatana nezvinhu zvisina kunaka, kubva mukunhuhwirira kwayo kusvika kune yakashata zvakaipa mumuviri wemunhu. Kunyangwe iyo cannabis ichive chepamutemo mune zvekurapa kana zvekunakidzwa mumatunhu mazhinji, iyo yeruzhinji kana yekushandiswa kwevanhu mune zve cannabis inoramba ichinyanya kusiri pamutemo. Izvi ndizvo zvakananga mhedzisiro iyo yakapihwa simba kubva 1937, ine zero zero inoenda mune chero rubatsiro rwe cannabis uye ichingobvumidzwa kutsvaga mhedzisiro yakaipa uye inokuvadza kwekushandiswa kwe cannabis. Nechikonzero ichi chaicho, Israeri uye kwete United States inoramba iri epicenter yesainzi ye cannabis.
Nzvimbo dzei iyo yeruzhinji yekushandisa cannabis inonzi?
Marijuana (cannabis) Kafesi
Cannabis Kofi Shops (Amsterdam)
Cannabis Bar / Pubs
Local Kudzvinyirira & Cannabis Social Club
verenga Thomas 'Chinyorwa paSocial Use of Cannabis kuCannabis Law & Regulation Reporter - Pano.
Vanamuzvinabhizinesi veCannabis vanofanirwa kutarisa muGeneral Providence inowanikwa pasi peChinyorwa 55 cheI Illinois Cannabis Regulation uye Mutero Mutemo (iyo "Mutemo"), 410 ILCS 705 / 55-25. Ngatimuisei pane peji rako iwe:
On-Premises Kutya kweCannabis Regulation
Chikamu ichi chinobvumira kwete chete "nzvimbo dzebhizimisi re cannabis" kuve neinternet nzvimbo, asiwo chero chero sangano rakabvumidzwa nehurumende yenzvimbo. Mutemo uyu unotsanangura "bhizimusi re cannabis" pasi pechinyorwa charo Tsanangudzo sebhizimusi re cannabis rakabvumidzwa. Mutemo unoenda zvakatowanda uye unopa mvumo yekuwedzera kune hurumende dzepasirese dzekuwedzera kushandiswa kwe-cannabis kushandiswa kupfuura kweanowanikwa bhizinesi re cannabis, sema disensaries, mune chero sangano rakabvumirwa.
Hurumende dzenharaunda dzinoshandisa simba rakawanda kana zvasvika kune mitemo ye cannabis, kunyangwe nyika dziri kuisirwa mutemo. Nyika zhinji dzinobvumira matareta kuseta huwandu hwemarezinesi e cannabis munzvimbo yavo yekutonga. Ipo Illinois iine nyika-inorayirwa siling kune kwayo cannabis marezenisi, maneja anogona kuseta "zvine musoro kumisikidza miganhu" kutonga zve cannabis bhizinesi.
Hurumende yemunharaunda inogona kurambidza masangano e cannabis mabhizinesi uye kuita zvimiro zvinonzwisisika maererano nehuwandu hwayo, nzvimbo dziri kure nenzvimbo dzinoratidzwa kuti dzakanzwisisika netaundi, uye imwe nguva, nzvimbo uye maitiro maitiro.
Kunzwisisa nguva dzose ichokwadi chakadzama kuongororwa pamusoro pemamiriro ezvinhu, asi zvakare inopa hurumende dzenharaunda nzira nyowani dzinogadzira kukurudzira mabhizinesi ane chekuita ne cannabis uye kuburitsa mari.
yekare analog kune cannabis yemagariro ekushandisa nzvimbo ibha inoshanda doro. Kazhinji, maseneta haanei neyomumwe chete mutemo wedoro.
Ongororo yezvisarudzo zvemuguta rangu rekupedzisira zvakaguma nemabvumirano edoro reClass A kuburikidza neL, uye mamwe manomwe madiki-makirasi. Cannabis inopa zvakafanana misiyano yakawanda yeruzhinji yekushandisa marezenisi, uye zvimwe zvimwe.
Mataipisiti anogona kubvumira cannabis lounges uko vanhu vangadya vakanamira zvigadzirwa zve cannabis vega nekuda kwekuchengetedza nhoroondo iyo inoperekedza kwenguva pfupi yekukanganisa kwemhedzisiro yekuzvipusha cannabis, asi bara ingestion. Kana kuti maneti anogona kuve neakawomesera, akakurudzirwa sezvakanaka, mirairo ine chekuita nekushandiswa kweruzhinji rwezvigadzirwa zve cannabis zvigadzirwa kupa mamwe akachengeteka-varindi mu dosing. Kumwe kukanganisika kunogona kukonzerwa nevanhu vasina kushandiswa pakutanga uye pakudyarwa kwenguva yezvakarongeka sekupesana nemweya wakawanikwa mu cannabis. Kudzidzisa mutengi uye neruzhinji rusaruro kuchiri musimbuko mukuenda kumutemo uye kwakanzwisisika mutemo.
Pamusoro pezvo, mutemo uyu haupi pachena kupa cannabis chirairo makirabhu umo mapiki anogadzira yakachena cannabis yakarongedzwa ndiro yevaenzi. Zvichida zvinonzwisisika pane-nzvimbo yekushandisa mirayiridzo yakagadzwa neruwa inopa nzira yekuzadzisa izvo migumo. Chokwadi, disensary yega haigone kugadzira ndiro dzakabikwa. Uyezve, iyo mirayiro yeChita haina kukodzera kwemwedzi yakati wandei. Nguva ichataura pamashandisirwo emagariro evanhu cannabis muIllinois zvichienderana neizvo masangano ehurumende anofunga kuita ne cannabis munharaunda dzavanogara.
Seizvo zvinwiwa zvechinwiwa uye kuisirwa kwavo kwakawanda segwara rechisarudzo chezvinobvira nekushandiswa kwevanhu mune zve cannabis, uye kushandiswa kwakadzama kweshoko rekuti "chakabvumirwa chinzvimbo" pasi peMutemo kune izvo zvinogona kunge zviri pa-saiti yekushandisa, matenga ndiwo mugumo. Kudya kweveruzhinji kwakarambidzwa, asi pamwe zviitiko zvakavanzika, kunge mutambo wemimhanzi, unogona kuve wakakodzera mhando yakakosha yerudzi rwe cannabis rezinesi. Zvichida mushandi wepasirose wemunharaunda anogona kutanga kushandisa cannabis topicals pane varwere. Kirasi yeYoga inogona kunge iine chiitiko pamwe nekurudyi kubatana pairing kune yako asanas. Baki anonyanya kukoshesa nzvimbo makeke uye akabata ese cannabis infuser uye marezinesi ekurambidza anogona rimwe zuva rive rechokwadi.
Misiyano pakati peMasevhisi & Kutengesa kweVoruzhinji Cannabis Use
Mvumo yekushandiswa kwevanhu munharaunda inobvumirawo mari yakawanda yenharaunda. Kazhinji vatengesi vanobhadhara mitero yeiri yedoro nedoro ravanotengesa. Mutemo wakapa mari yemutero kune ese mahurumende pamwe nemasipika kubva pakutengeswa kwe cannabis kumahofisi. Zvichida manejimendi anogona kubhadharisa mutero unobva kutengeswa kwezviputi paresitorendi, uchifungidzira Mutemo uye nemirimo iri kuuya saka bvumidza chikafu ichocho chakamonyaniswa. Zvakadiniko nezveearth Therapist iyo inoda kushandisa cannabis kuti ishe maronda emaronda? Inofanira kunge iri sevhisi nekuti ma disensaries chete anogona kutengesa isati-yakaunganidzwa cannabis. Nekudaro, manenji anogona kubhadharira mari yemvumo yekushandiswa kwakadaro uye pamwe nekugadzirisa huwandu hweTHC mukudzora kurwadziwa. Mune ramangwana, pane-saiti yekushandisa lounges ichaunza iyo maseru kuwedzera mvumo yemari uye yekutengesa mutero.
Zvichida rimwe zuva mitero ichave inonyanya kudhura musanganiswa we cannabis, senge doro pamberi payo. Izvi zvinotora shanduko zhinji dzemutemo kumutemo we cannabis, asi yeuka kuti kunyangwe muna 2019 maUnited States vakapfuura mazana emadhizaini kumitemo yavo yedoro. Shanduko padanho rezvemitemo inotora nguva, asi zvakare haina kumira.